Maqaal: QALIN JABISEE MAXAAD QABAN? Qalinkii Tiriig – Saraar Media
Home›Articles›all articles›Maqaal: QALIN JABISEE MAXAAD QABAN? Qalinkii Tiriig
Last Updated on September 8th, 2016 at 02:47 pm
Waxaa xusid Mudan in mudooyinkii ugu danbeeyey ay dalka ka qabsoomayaan xaflado is daba jooga oo qalin jabineed oo ay arday tiradoodu kor u dhaaftay kumanaan arday kaga qalin jabiyeen jaamacadaha dalka ee kala duwan.
Hadaba waxaa ardaydaa kala qayb galay madaxweyne Axmed (siinlaanyo) iyo raxan golihiisa wasiiradiisa ka tirsan kuwaa soo si isku mid ah u bogaadiyey ardaydaa qalinjabisay.
Iyana waxaa xusid Mudan inaan ardaydaa tirada badan ee dalka wax u baratay aanay badidoodu hayn wax shaqo ah.
Hadaba shaqo la,aanta baahsan ee asiibtay da,a yarta aqoonyahanka ah ayaa sababtay in dhalinyaro badani ay hoy ka dhigtaan oo ay camiraan goobaha bulshadu ku kulanto
sida (maqaaxiyaha) halka qaar kale ay door bideen in ay nafahooda ku biimeeyaan badaha khatarta ah.
Hadaba madaxweynuhu miyaanu ogayn hadii uu arinku sidaa sii ahaado in ay taasi keeni karto nabad_galyada oo meesha ka baxda?
Waa hubaal hadii imika wax laga qaban waayo xukuumaduna ay ka yeelan weydo siyaasad cad ardaydaa sii badanaysa ee sanad walba ka baxaysa jaamacadaha dalka in uu iman doono kacdoon aan la mahadin.
Waxaa kaloo fool xumaa in uu madaxweynuhu sanad walba kumanaanka arday uu ku qanciyo erayo aan micno badan u lahayn arday tacab iyo waqti badan la galiyey oo dhaqan iyo caado uu ka dhigtay madaxweyne siinlaanyo.
Waxaa intaa ii raacda meeday wasaaradii qarankan u qaabilsanayd tayeynta waxbarashada ma waxay iskugu biyo shubatay in ay ku faanto oo ay horumar moodo tirada badan ee sanad walba baxaysa.
Wasiir habane waxaan ku leeyahay amaan kuu noqon mayso jaamacad heblaayo intaas oo arday ayaa ka qalin_jabisay oo arinkaasi noqdo TIRO laakiin maya TAYO.
Waxaa kaloo nasiib daraa jaamacadaha dalka ku soo badanaya ee aan la ogayn waxa dhiga iyo waxaa lagu barto iyo manhajka waxbarasho ee ay raacaan wasaaradii u qaabilsanayd ay noqoto mid ka seexata waxii loo igmaday ogolaanshaha jaamacadahana aad moodo in ay si dhib yar u bixiso wasaaradu.
Guntii iyo gunaanadkii waxaan hadalkayga ku soo afmeeri lahaa in albaabada loo laabo jaamacadaha gaarka loo leeyahay ee heer gaadhay in baraha jaamacadu in lagu qaato qaab beelaysan ee aan loo eegin aqoontiisa.
Waxaynu nahay dal mar walba ku faana in uu 25 jirsaday se kaabayaashii aasaasiga ahaa aanay xukuumadu gacanta ku haynin sida laydhka, caafimaadka, waxbarashada, iyo biyaha.
Hadii uu arinku sidaa uu ku sii socdo waxaynu sugnaaba waa dhakhtar dadka sumeeya, injineer guryaha inaga dumiya, dhaqaalo yahano suuqa wareeriya iyo wax la mid ah
Jamacadaheenu waxay noqon laba mid qaar soo saara arday TAYO leh iyo qaar soo saara budhcad dalka waasha ….
Maqaal: ISBADALKA LA RABO,YAA KA HIRGALIN KARA ...
Markab Weerar ka Gaystay Xeebaha Soomaaliya